मलेसियामा मासिक तलब १५०० बनाउन माग गरेपनि किन लागु हुदैन ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा मासिक तलब १५०० बनाउन माग गरेपनि किन लागु हुदैन ?
क्वालालम्पुर- सन् २०२२ को शुरूदेखि नै मासिक तलब १५ सय रिंगेट र मासिक ३ तीन सय रिंगेट भत्ता हुनुपर्ने माग गर्दै मलेसियामा मजदुर सडकमा
बंगालीको हर्कतले मलेसियन नागरिक वाक्क, अब नेपाली कामदार मगाउन सरकारलाई अनुरोध
बंगाली कामदारहरुले वाक्क बनाउन थालेपछि मलेशियन लोकल नागरिकहरुले बगाली कामदार कम गर्न माग गरेका छन् ! मलेशियामा बंगलादेशी कामदारहरुको संख्या ठुलो छ ! बंगाली नागरिकहरुले दु:ख दिन थालेपछि मलेशियामा बंगाली नागरिकको संख्या घटाउन माग उठ्न थालेको छ! उनीहरुले यस विषयमा आफ्नो सरकारलाई असन्तुस्टी जनाउन थालेका छन् ! यो लेख एक मलेशियन नागरिकले लेखेका हुन् !